အပြင်ပန်းသုတ်ဆေး | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan - wallpro.com.tw
1.ဆန့်ကျင်-မှိုဆေးသုတ်ရေ-မှိုကြီးထွားတားဆီးဖို့လုံလောက်တဲ့ခံနိုင်ရည်.ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကိုနိပွန်စနစ်၏အထူးယွန်းအင်္ကျီကိုသာပြင်မြို့ရိုးကိုအသုံးချမရနိုငျ,ဒါပေမယ့်လည်းအတွင်းစိတ်မြို့ရိုးပေါ်မှာသုံးနိုငျ.ကြွယ်ဝသောအသုံးအနှုနျးမြားကိုအပြင်,အင်္ကျီကိုရေလုပ်နေကြတယ်-based တုံ့ပြန်တင်းမာဗဓေလသစ်.ရေခုခံ,မြို့ရိုးပေါ်မှာအသုံးပြုခဲ့,ရေညှိတားဆီးနိုင်ပါတယ်,မှိုကြီးထွား,ဒါဟာကောင်းသောရေငွေ့ permeability ရှိပါတယ်,နှင့်အဆောက်အဦးမှငွေ့ရည်ဖွဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတားဆီးနိုင်ပါတယ်.
2.အထူကုသမှု texture ဖန်တီး.ယေဘုယျအားဖြင့်,အင်္ကျီအများအားဖြင့်တစ်ဦးပြားအပေါ်ယံပိုင်းအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရေပိုင်နေကြသည်-based Silicon တင်းမာ type ကိုအပေါ်ယံပိုင်း.
3.ဆန့်ကျင်-မှိုဆေးသုတ်အရောင်ပုံစံများကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြသည်.အရောင်ရွေးချယ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေးအညီဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်,နှင့်လည်းအရောင်များ၏အရောင်ကိုက်ညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်.ပုံစံများအတွက်အဖြစ်,ကနေရှေးခယျြဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကျော် 32 မျိုးကိုလက်ရှိရှိပါတယ်,တစ်ခုတည်းနည်းလမ်းအပြင်,တစ်ခုတည်းအဆင့်ကိုဖေါ်ပြခြင်း,လည်းပေါင်းစုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်-ရှုထောငျ့,mashup နေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား texture စွမ်းဆောင်ရည်ကို.